Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » New Forum
1 New Forum on 11th February 2010, 6:09 pm
ကျွန်တော် ဖိုရမ်တစ်ခု လုပ်နေတာ ဘာတွေက မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ် ဆိုတာလေးတွေ ပြောပေးပါ။
2 Re: New Forum on 11th February 2010, 6:36 pm
ဒါပေမယ့် အစ်ကို မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော် နားမလည်ဘူးဗျ။
ဖိုရမ် တစ်ခုလုပ်နေတာ ဆိုတော့ စနေပြီကို ဆိုလိုတာမှလား။
ဘာတွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် ဆိုတာ ဘာကို မေးတာလဲမသိဘူး?
အစ်ကို လုပ်နေတာ php? vb? ipb? smf? ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်ခုခုနဲ့လား။
အစ်ကို မေးတဲ့ မေးခွန်းကို နားမလည်လို့ပါခင်ဗျာ။
3 Re: New Forum on 11th February 2010, 7:40 pm
php, vb, ipb, smf အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှ မတတ်ဘူးဗျ html, xhtml, အဲ့ဒါတွေလည်း မတတ်ဘူး
အခုလုပ်နေတာက ဖိုရမ်အသစ်လုပ်တယ် forumotion.net ကနေ လုပ်ကြည့်နေတာ။
အဓိက လုပ်ချင်တာကတော့ information technology နဲ့ ပတ်သက်တာတွေပါ။
catagories တွေခွဲ ခေါင်းစဉ်တွေ ဘယ်လိုချရမလဲဆိုတာသိချင်တာပါ။
4 Re: New Forum on 11th February 2010, 7:52 pm
kyawzwathant wrote: php, vb, ipb, smf အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှ မတတ်ဘူးဗျ html, xhtml, အဲ့ဒါတွေလည်း မတတ်ဘူး
အော်။ ကျွန်တော်တို့လို လုပ်ကြည့်နေတာ ဆိုပါတော့။
ကျွန်တော်တို့လို လုပ်ကြည့်နေတာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လို အခြေအနေရောက်လာဖို့ တော်တော်ခက်မယ်နော်။
ဘာလို့ဆို နေ့မအိပ် ညမအိပ်လုပ်လာတာတောင် ဒီရုပ်ဘဲထွက်သေးတယ်။
နောက်ထပ်လည်း ပြင်စရာတွေ ကျန်သေးတယ်။
IT နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ လုပ်ချင်တာလည်း ကောင်းပါတယ်။
မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျာ။
အဲဒီ့ စိတ်ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ အကူအညီတောင် မလိုဘူး ၊ သူ့အလိုလို ဖြစ်သွားမှာပါ။
အစ်ကို့ မှာ အချိန်လုံလုံလောက်လောက် ပေးဆပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။
Forum တည်ထောင်တယ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ရတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အကျိုးကျေးဇူး တစ်ပြားသားမှ မရပါဘဲ သူများကို ကိုယ့်အိတ်စိုက် ကူညီရမယ့် အလုပ်က အခက်ခဲဆုံးပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော့် Gtalk ကို Add ထားပေးပါ။ swanhtet1992[at]gmail[dot]com
ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်ကဆိုရင် အပြင်မှာအားတဲ့ အချိန်တွေ့ပြီး မေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာပြောနေရင်က ပုံတွေဘာတွေနဲ့ လုပ်ရမှာဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အဲလောက်အချိန်မရလို့ပါ။
5 Re: New Forum on 11th February 2010, 8:22 pm
ကျေးဇူးဘဲ add ထားလိုက်ပီ
6 Re: New Forum on 12th February 2010, 10:27 am
ဟူး တော်တော် မလွယ်တာပါလား
အချိန်တွေ ကျန်းမာရေးတွေ ပညာတွေ
7 Re: New Forum on 12th February 2010, 10:51 am
kyawzwathant wrote: ဟူး တော်တော် မလွယ်တာပါလား
ဟုတ်တယ်ဗျို့... လွယ်တာကတော့ နည်းနည်းမှမလွယ် ရေးချ မလွယ်ပါဗျာ.... ဖိုရမ် တစ်ခုရဲ့ founder တို့ admin တို့ဆိုတာ အချိန်တွေတော်တော်ပေးရတာ... မြန်မာပြည်က con: နဲ့ဆို ပိုဆိုးတာပေ့ါဗျာ.... ဒါလောက်ဖြစ်လာတာ အများကြီးလုပ်ထားလို့ဆိုတာ ကြည့်တာနဲ့သိသာတယ်လေ... ကျနော်လည်းအခု အဲဒါကြီးတစ်ခုနဲ့ တိုင်ပတ်နေတာ... ပညာတော့ရပါတယ်ဗျာ... မလုပ်ဖူးတာဆိုတော့... ဒါပေမယ့် ကျနော် တခြားတစ်ယောက်ကို တွေ့ရင်အခုလွှဲပေးဖို့လုပ်နေတယ်... ကျနော်ကတော့ စမ်းကြည့်ရုံသာလုပ်သာဆိုတော့ ရေရှည်မှာမလွယ်ဘူးလေ... ၀ါသနာပါရင်ဆက်သွယ်ပါ... :doit :find
8 Re: New Forum on 12th February 2010, 11:22 am
အခု zero ကနေစနေတာ :find
9 Re: New Forum on 12th February 2010, 11:24 am
kyawzwathant wrote: နမူနာကြည့်လို့ရမလား
အဲဒိကိုသာခဏလာခဲ့ပါ... တအားပင်ပန်းတယ်... လုပ်ရတာ... ၀ါသနာပါရင်လာကြည့် လေ.. ရပါတယ်...
10 Re: New Forum on 12th February 2010, 1:04 pm
wow ဒီလိုဆိုရင် ကူညီချင်တယ် ဘာမှမတတ်ဘူး ဒါပင်မဲ့ ကြည့်ပြီးတော့တော့ ရအောင်လုပ်တတ်တတယ် ဟိုနားကဟာယူလိုက် ဒီကဟာယူလိုက်ပေါ့ ဟီဟီ အချိန်ကတော့ တပတ်ကို ၁ရက် လုံးဝအားတယ်ဗျာ ကျန်တာက ကျောင်းစာတွေလုပ်ရတယ် founder လဲမဖြစ်ချင်ဘူး admi လဲမဖြစ်ချင်ဘူး ကူညီချင်တာပဲရှိတယ်
11 Re: New Forum on 12th February 2010, 5:17 pm
သွားကြည့်ပီးဘီ တော်တော်ကောင်းပါတယ် လုပ်ထားတာလည်း ပြည့်စုံသလောက်ပဲ
ကျွန်တော်လည်း တော်တော်များများကို လေ့လာရဦးမယ်
12 Re: New Forum on 12th February 2010, 7:18 pm
13 Re: New Forum on 21st February 2010, 9:24 am
ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုပြောပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.... အခုကျနော်တို့ဖိုရမ်ဆိုတာက အဓိကလုပ်သွားတာက အဲဒိက admin ညီငယ်လေးတွေပါ.... ကျနော်က ဘာမှမသိပါဘူး... စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ w3school မှာ ရှာရှာပြီး လုပ်ချင်တာလေးတွေကို လုပ်ကြည့်တာပဲရှိတာပါ... မလုပ်တတ်တော့ပင်ပန်းတာကိုပြောတာပါ.... အခုတလော ဖိုရမ်မှာ မန်ဘာတွေများလာတယ်မှတ်တာ... ဘယ်ဟုတ်မလဲ အခုဒီက လူတွေရောက်လာလို့ဖြစ်ရမယ်... ဟီး.... လာတဲ့သူတိုင်း အဲဒိဖိုရမ်မှာ ခြေရာလေးတွေချန်ထားခဲ့နော်... ဘာပဲပြောပြော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
14 Re: New Forum on 21st February 2010, 12:43 pm
ဖိုရမ်တစ်ခု အသစ်လုပ်တာလဲ မလွယ်သလို
ဖိုရမ်တစ်ခု အစဉ်တည်မြဲဖို့ ထိန်းသိမ်းရတာလည်း မလွယ်ဘူး
MITR အစဉ် တည်မြဲဖို့အတွက် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ကူညီတဲ့
အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ
အဓိက ကတော့ အသက်အရွယ်ထက်
စိတ်ဓာတ်တွေ ရင့်ကြက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
15 Re: New Forum